Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Rheumatoid arthritis လေးဘက်နာ (၂)
သမီးမှာ RA positive ဖြစ်နေပါတယ်။ မည်သည့် အစားအစာများကို ရှောင်ရမလဲ။ RA သည် လေးဘက်နာနှင့် အတူတူဘဲလား။ အဆစ်တွေ အားလုံး နာနေပါတယ်။ နံက် အိပ်ရာထချိန် အဆိုးဆုံးပါ။
Arthritis အဆစ်နာ အမျိုးအစားပေါင်းက ရာကျော်ရှိတယ်။ ရောဂါရာဇဝင် နဲ့ ဆရာဝန်ကနေ စစ်ဆေးတာနဲ့ စမယ်။ စစ်ဆေးရင် -
1. အဆစ်နေရာမှာ နီနေမယ်၊ ရောင်နေမယ်၊
2. နာနေ၊ တင်းနေမယ်၊
3. အဆစ်ထဲမှာ အရည်ပိုဖြစ်လာလို့ ရောင်နေမယ်၊
4. အလုံးလို-အကျိတ်လို ဖြစ်လာမယ်၊
5. တဖက်ထဲလဲ ဖြစ်နိုင်၊ ဘယ်-ညာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊
6. လှုတ်ရှားရတာ အရင်လောက်မရ ဖြစ်လာမယ်၊
အဆစ်နာဖြစ်နေသူတွေကို သွေးစစ်တယ်။ RF positive ဒါမှမဟုတ် CCP ရှိနေသူဆိုတာ Rheumatoid arthritis (RA) ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို သေခြာစေတယ်။ မရှိတိုင်း မဖြစ်ဘူး မဟုတ်ပြန်ပါ။ ၃ဝ% မှာ RA antibodies ဆိုတာ မတွေ့ဘူး။ အထူးသဖြင့် ရောဂါဖြစ်တာ စောသေးရင် မရှိကြဘူး။ Anti-CCP antibody ရှိနေသူက ပိုသေခြာတယ်။
• Blood tests = Rheumatoid Factor ၇ဝ-၈ဝ% မှာ ရှိနေမယ်။
• Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) မြင့်မားနေမယ်။
• Antinuclear Antibodies (ANA) အသင့်ကနေ များနေမယ်။ Systemic Lupus Erythematosus ဖြစ်နေရင် ၉၅% သေခြာတယ်။
• Complete Blood Count လုပ်မယ်။ White blood cell သွေးဖြူဥ များနေနိုင်တယ်။
• X-rays ဓါတ်မှန် နဲ့ Magnetic Resonance Imaging (MRIs) လဲလုပ်နိုင်တယ်။
• Rheumatism လေးဘက်နာ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/06/rheumatism_08.htmlနဲ့
• Arthritis အဆစ်နာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/06/arthritis_08.htmlစာတွေကိုလဲ တွဲဖတ်ပါ။